Ubunzima ekuphuhliseni iRain Chain yoShishino loMhlaba eMelika
I-United States kunye nabalingane bayo baceba ukuchitha imali eninzi ukuphuhlisa ishishini elinqabileyo lomhlaba, kodwa kubonakala ngathi lihlangabezana nengxaki enkulu engenakho ukusonjululwa yimali: ukunqongophala okukhulu kweenkampani kunye neeprojekthi. Unomdla wokuqinisekisa ukubonelelwa komhlaba onqabileyo kunye nokuphuhlisa amandla okusebenza, iPentagon ...
I-China ithunyelwe ngaphandle i-3737.2 iitoni zoMhlaba oRhasi ngo-Epreli, yehla nge-22.9% ukusuka ngoMatshi
Umhlaba onqabileyo unodumo "lomhlaba onamandla onke". Sisibonelelo esinqabileyo esingabalulekanga kwiindawo ezininzi ezinje ngamandla amatsha, i-aerospace, i-semiconductor njalo njalo. Njengelona lizwe likhulu kunqabileyo emhlabeni, iTshayina inelizwi eliphezulu. Ngokwedatha esemthethweni, iC ...
Ukuzenzekelayo Ukuphucula uMgangatho woMazibuthe weMagnet
Ngonyaka we-2020 Horizon Magnetics yongeza ezinye iiseti ezine zoomatshini bokucheba oocingo oluninzi ukusika zombini iibhloko kunye neearc ezimilise iimagnethi ukuze kunyuswe umgangatho wobungakanani bemagnethi kunye nokubonakala nokusebenza kwemishini. Umazibuthe onqabileyo womhlaba osisigxina ohambisa umatshini omninzi ngokuzimeleyo ...
I-Horizon Magnetics yeWebhusayithi eNtsha isungulwe ngokusesikweni
I-Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co, Ltd ngumvelisi othe nkqo othe nkqo womhlaba onqabileyo wemagnethi kunye neendibano zawo ezinxulumene noko, ezaziwa ngokubanzi ngabathengi kwihlabathi liphela. Kodwa ingxelo yethu yakudala yoluhlu lwewebhusayithi zineemveliso ezinqongophele kwaye akukho lula ...
Ukunyuka kweShishini le-Magnetics kwi-2020
U-2020 ngunyaka onzima kwiinkampani ezininzi ngenxa yokuhlaselwa yi-COVID-19 engalindelekanga. Uninzi lweshishini luyehla. Nangona kunjalo, iHorizon Magnetics ifumana ukunyuka okuncinci kunonyaka ophelileyo ngenxa yenkxaso eqhubekayo evela kubathengi bethu abathembekileyo. I-Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co, Ltd yey ...